I-Google's Antitrust Suit iyiHarbinger Yamanzi Akhohlakele Izinguquko ze-IDFA ze-Apple | Martech Zone
Ngenkathi kuza isikhathi eside, ukumangalelwa kwe-DOJ mayelana ne-Google sekufike ngesikhathi esibalulekile embonini yezobuchwepheshe bezikhangiso, njengoba abathengisi balwela ukukhubazeka kuka-Apple Isikhombi Sabakhangisi (IDFA) izinguquko. Futhi njengoba i-Apple nayo isolwa embikweni wamakhasi angama-449 wakamuva ovela e-US House of Representatives ngokusebenzisa kabi amandla ayo okubusa, uTim Cook kumele ngabe ulinganisa izinyathelo zakhe ezilandelayo ngokucophelela okukhulu.
Kungenzeka yini ukuthi ukuqiniswa kwe-Apple kubakhangisi kungenza kube yinkampani enkulu yezobuchwepheshe ezobizwa? Lowo ngumbuzo imboni yezobuchwepheshe bezikhangiso eyizigidi ezingama- $ 80 okwamanje ecabangayo.
Kusukela manje, i-Apple Inc. ibonakala ibhajwe phakathi kwedwala nendawo enzima: isebenzise izigidi ukuzibeka njengenkampani ye-centric yemfihlo yomsebenzisi, nasekuthuthukiseni indawo ye-IDFA, ebilokhu iyitshe legumbi lomuntu uqobo ukukhangisa kwedijithali iminyaka. Ngasikhathi sinye, ukuqeda i-IDFA kuvuna uhlelo lwayo oluvaliwe lweSkAdNetwork, kungenza i-Apple ibe yilungu elingenzeka kakhulu lokuthola isitifiketi sokulwa nokuthembana.
Kodwa-ke, ngokuhlehliswa kwayo kwakamuva kwezinguquko ze-IDFA ekuqaleni kuka-2021 i-Apple isenesikhathi sokushintsha umzila wayo wamanje futhi igweme ukulandela ezinyathelweni zeGoogle. Kungaba ukuhlakanipha ukuthi i-tech giant inake icala le-Google futhi igcine i-IDFA noma ithuthukise kabusha i-SkAdNetwork ngendlela engenzi ukuthi abakhangisi bathembele ngokuphelele kudatha yayo yomsebenzisi egodliwe yodwa.
Ngendlela elikuyo manje, Okuhlongozwayo yi-Apple I-SkAdNetwork kubukeka njengokunyakaza okukhulu kunakho konke okuphathelene nobukhosi kunalokho okwenziwe yiGoogle embonini yosesho. Yize iGoogle ingumdlali omkhulu kunabo bonke emkhakheni wayo, okungenani, kunezinye izinjini zokusesha abathengi abangazisebenzisa ngokukhululeka. I-IDFA, ngakolunye uhlangothi, ithinta yonke imvelo kubakhangisi, abakhangisi, abahlinzeki bemininingwane yabathengi, nabathuthukisi bohlelo lokusebenza abangenakho okunye ngaphandle kokudlala ibhola nge-Apple.
Akusikho okokuqala i-Apple isebenzisa isandla sayo esiphezulu ukuphoqa imakethe ukuthi ithobele. Ezinyangeni ezedlule, abathuthukisi bezinhlelo zokusebenza bebelokhu bephikisana nemali enkulu ka-Apple engu-30% evela kukho konke ukuthengisa okwenziwe ezitolo zayo zohlelo lokusebenza - isithiyo esikhulu sokwenza imali. Izinkampani eziphumelele kakhulu kuphela ezinjengeMidlalo yama-Epic ezinekhono lokuphishekela impi yezomthetho ne-tech giant. Kepha ne-Epic kuze kube manje ayiphumelelanga ukuphoqa isandla sika-Apple.
Ngejubane lamanje, noma kunjalo, inqubo eqhubekayo yokulwa nokuthembana izothatha isikhathi eside ukwenza ushintsho olunenjongo embonini yezobuchwepheshe bezikhangiso. Abashicileli bakhungathekile ukuthi icala elibhekene neGoogle ligxile kakhulu ezivumelwaneni zokusatshalaliswa kwenkampani ezikwenza injini yokusesha ezenzakalelayo kepha lihluleke ukubhekana nokukhathazeka kwabo okuyinhloko ngemikhuba yenkampani ekukhangiseni online.
Ngokuya ngocwaningo lwakamuva lweziphathimandla zezokuncintisana zase-UK, amasenti angama-51 kuphela edoli elilodwa elichithwa ekukhangiseni ifinyelela kumshicileli. Amasenti angama-49 asele avele ahwamuke angene ochungechungeni lokunikezwa kwedijithali. Ngokusobala, kunesizathu sokuthi abashicileli bakhungatheke ngakho. Icala le-DOJ likhanyisa iqiniso elibuhlungu embonini yethu:
Futhi ukuphuma kumabhodlela esiwakhile kuzoba inqubo ebucayi kakhulu, ehamba kancane futhi eyisidina. Ngenkathi i-DOJ ithatha izinyathelo zokuqala ngeGoogle, ngokuqinisekile inayo i-Apple nayo. Uma i-Apple ifuna ukuba sohlangothini lwesokudla salo mlando ekwenziweni, i-giant kufanele iqale ukucabanga ukuthi ingasebenza kanjani nemboni yezikhangiso kunokuba izame ukuyilawula.